ओली-दाहाललाई चेतना भया- जेट दुर्घटना भए केही बाँकी रहन्न
बिहीवार नेपाली राजनीतिको क्षितिजमा एउटा नयाँ रेखा कोरिएको छ । त्यो रेखा हो नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र विघटन भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम गरेको राजनीतिक दल स्थापना हुन पुगेको छ । यद्यपि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम गरेको राजनीतिक दल नेपाली राजनीतिमा कुनै नौलो होइन । छिमेकी मुलुक चीनको राजनीतिक बाछिटासँगै २००६ सालमा नै पहिलोपटक यही नामको कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा स्थापना भएको थियो ।
कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको २ वर्ष बित्न नपाउँदै २००८ सालदेखि गुट उपगुट शुरु हुन पुग्यो । जुन क्रम झण्डै ११ वर्षसम्म रह्यो र २०१९ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी विधिवतरूपमा विभाजित हुन पुग्यो । त्यसपछि पनि विभाजनका श्रृंखलाहरू जारी नै रहे । यही बीचमा ६९ वर्षपछि पुनः दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एक हुन पुगेका छन् ।
दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एक हुँदै गर्दा यसले विश्व राजनीतिमा समेत एक किसिमको तरङ्ग उत्पन्न हुन पुगेको छ । यस अर्थमा तरङ्गित हुन पुगेको छ कि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी दक्षिण एशियामा तेस्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बन्न पुगेको छ । दक्षिण एशियामा तेस्रो ठूलो पार्टी बन्न पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संख्यात्मकरूपमा मात्र नभई सांगठनिक र राज्य सत्ता सञ्चालनका हिसाबमा समेत निकै बलियो बन्न पुगेको छ ।
मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिघटनालाई हेर्ने हो भने एकीकरण भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट नै मुलुकको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र ७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । त्यसैगरी पछिल्लो चुनावी परिणामका आधारमा पनि सर्वाधिक पपुलर मत ल्याउने पार्टी बन्न पुगेको छ ।
जुन पार्टीको पपुलर मत ४५ लाख हुन आउँछ । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाको कुल १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र मध्ये १ सय १६ निर्वाचन क्षेत्रका सांसद यही पार्टी चुनिएको अवस्था छ । यसका अतिरिक्त प्रतिनिधि सभाका कुल २ सय ७५ मध्ये १ सय ७५ सांसद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाटै हुने भएका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय सभाको कुल ५९ सदस्य मध्ये ४२ सदस्य र कुल ७ सय ५३ स्थानीय तह मध्ये ४५ प्रतिशत भन्दा बढी स्थानीय सरकार समेत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट नै हुने भएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध नेता तथा कार्यकर्तालाई यो भन्दा खुसीको क्षण अरु के होला ?
यस्तै खुसी साट्ने क्रममा पार्टी एकीकरण हुँदै गर्दा तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई जेटसँग तुलना गरेका छन् । यसरी तुलना गर्ने क्रममा ओलीले भनाइ थियो- कम्युनिस्ट पार्टी टेम्पो हो र एक जनाले चलाउने ? जेट चलाउन दुईजना पाइलट चाहिन्छ ।'
पार्टी एकीकरण हुँदै गर्दा ओली जुन तर्क अगाडि सारे त्यो एक हिसाबले सही हो । किनकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हर हिसाबले अब टेम्पोबाट जेट विमान बनेको छ । जेट चलाउनका लागि पाइलट नै आवश्यक पर्दछ । तर ओलीले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि जेटको एउटै सिटमा दुई पाइलट एकै पटक बसेर जेट उडान गरेको भने देखिँदैन । जसरी अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई ओली र दाहाल मिलेर हाँक्न खोजिरहेका छन् ।
त्यतिमात्र होइन, जेटमा पाइलटसँगै को-पाइलट पनि अनिवार्य हुनु जरुरी छ । अर्को कुरा ओलीले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने पाइलटको लापरवाही जेट दुर्घटनामा पर्दा केही बाँकी रहन्न । यहाँसम्म कि जहाज के कारणले दुर्घटना भयो भनेर पत्ता लगाउन समेत ब्ल्याक बक्सको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ ।
ओलीकै भनाइलाई सापटी लिने हो भने ओली र दाहाल पार्टी एकीकरण हुनुअगाडि टेम्पो चालकका रूपमा रहेका थिए । पार्टी एकीकरणसँगै उनीहरू जेट चलाउने पाइलट बन्न पुगेका छन् । टेम्पो चालकलाई एक्कासि जेट चलाउने जिम्मा दिँदा कति सुरक्षित होला ? त्यो पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको भौगोलिक मात्र नभई राजनीतिक भू-बनोट पनि त्यति सुरक्षित मानिँदैन । बेला-बेलामा सोच्दै नसोचेका राजीतिक दुर्घटना भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कति सुरक्षित ढंगले नेपाली राजनीतिक क्षितिजमा अगाडि बढ्न सक्ला ? आम सर्वसाधारणको चासोको विषय बनिरहेको छ ।
यद्यपि अस्थिर राजनीतिका कारण मुलुकले खासै गति लिन नसकी रहेको अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भने एउटा नयाँ सन्देश भने दिन खोजेको देखिन्छ । तर त्यो कति टिकाउ हुन्छ त्यो भने भविष्यले देखाउनेछ ।